दुई सन्तानकी भाउजु लिएर देवर भागे, पक्राउपछि बयान सुन्दा सबै चकित ! -
Home मनोरन्जन दुई सन्तानकी भाउजु लिएर देवर भागे, पक्राउपछि बयान सुन्दा सबै चकित !
हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका अनौठा कुरा सुन्न र देख्न पाइन्छ। कुनै कुनै कुरा त यति अचम्म हुन्छ कि सुन्दा पनि हास्नु कि चकित हुनु मानिस अलमलमा पर्छ। पछिल्ला दिनहरुमा समाजमा हरेक दिन नयाँ र फरक कर्महरु भइरहेका हुन्छन् ।जुन कुरा सुन्दा हामीलाई
विश्वास गर्न गाह्रो हुन्त तर ति वास्तवमैं सत्य हुन्छन् । यस्तैं एउटा कुरा भारतको बिहार राज्यमा भएको छ । जुन नेपाली सीमा नजिक छ । यस कुराले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्दछ ।यहाँ आफ्नै भाउजु लिएर देवर फरार भएका छन् ।
देवरको पनि विवाह भएको छ उनका ५ वटा सन्तान छन् भने भाउजुका पनि २ सन्तान रहेका छन् ।भाउजुको विवाह १५ वर्ष पहिले भएको थियो । परिवारले प्रहरीमा मुद्धा हालेपछि उनीहरुलाई भागलपुरको तिलकामांझी क्षेत्रको जवारीपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । उनीहरु भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका हुन्। प्रहरीसँगको बयानमा खुल्न आएको छ कि विवाहको केही महिना पछि नैं देवर भाउजु सम्बन्धमा रहन थालेका थिए ।
हिडेको पनि देख्नु भएको छ होला । विवाह पश्चात मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी पश्चिमा रहनसहन आर्थिक अभाब रोगहरुको चपेटा जस्ता विभिन्न कारणहरुले श्रीमान श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने,एक अर्काको भावनाको कदर नगर्ने कुनै पनि मतलब नगेर्ने जस्ता धेरै समस्याले अन्ततः कतिपयको सम्बन्ध विच्छेद पनि समाचार बेला बेलामा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्सत मात्रामा आईरहेका हुन्छन ।
काठमाडौ । पछिल्ला दिनहरुमा समाजमा हरेक दिन नयाँ र फरक कर्महरु भइरहेका हुन्छन् । जुन कुरा सुन्दा हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्त तर ति वास्तवमैं सत्य हुन्छन् । यस्तैं एउटा घटना भारतको बिहार राज्यमा भएको छ । जुन नेपाली सीमा नजिक छ । यस्ता घटनाले नेपाललाईपनि प्रभाव पार्दछ । यहाँ आफ्नै भाउजु लिएर देवर फरार भएका छन् । देवरको पनि विवाह भएको छ **थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
उनका ५ वटा सन्तान छन् भने भाउजुका पनि २ सन्तान रहेका छन् । भाउजुको विवाह १५ वर्ष पहिले भएको थियो । परिवारले प्रहरीमा मुद्धा हालेपछि उनीहरुलाई भागलपुरको तिलकामांझी क्षेत्रको जवारीपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ । प्रहरीसँगको बयानमा खुल्न आएको छ कि विवाहको केही महिना पछि नैं देवर भाउजु सम्बन्धमा रहन थालेका थिए । यो घटना २५ मार्चामा भएको थियो । **थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
२५ मार्चाको राती सन्‍नी प्रसाद आफ्नै भाउजु सुमनलाई लिएर भागेका थिए । सन्‍नीका पिता उमेश प्रसादका दुई छोराहरु हुन् । उनले जेठो छोरो अमृतको विवाह सुमन देवीसँग गराएका थिए ।अर्को तर्फ सन्‍नीको विवाह चंदा देवीसँग भएको थियो जसका पाँच सन्तान रहेका छन् । २४ मार्च पूरा परिवार मीरगंज स्थित थावेमा पूजा गर्न गएका थिए । पुजा सकेर फर्केपछि सबै सुते तर ति देवर भाउजु सुतेनन फलस्वरुप **थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
बिहानैं तीनबजे उनीहरु त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन् । पक्राउपछिको बयानमा भाउजुले बिबाह गरेको केही दिनदेखि नै देवरसँग हरेक गोप्य रुपमा रहेको बताएकी छिन् । श्रीमानसँग आफुलाई खुशी नमिलेपछि देवर रोजेको र देवरलेपनि साथ दिएको उनको बयान छ । उनीहरु दुबैले आफुहरुसँगै हुँदा मात्र खुशी मिल्ने भएकाले यो निर्णय लिएको **थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,
अब कहिलै छुट्टिन नसक्ने बताएका छन् । न्यायिक निकायले के गर्छ उनीहरु त्यसको पर्खाइमा छन् । उनीहरुलाई थुनामा भने राखिएको छैन । परिवारको निवेदनका आधारमा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर परिवारसँग छलफल गराएको छ । प्रहरीले गराएको छलफलमा उनीहरु एकसाथ बस्ने निर्णय सुनाएका छन् । तर केही लेनदेन मिलाउनुपर्ने सहमति भएको छ । **थप भिडियो यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस्**,